Miyaad Tahay Inaad Dhisato ama Iibsato Mawqifkaaga Suuqgeynta Xiga? | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 16, 2014 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Dhawaan, waxaan qoray maqaal aan kula talinayo shirkadaha inaysan marti gelin fiidiyowgooda. Waxaa jiray xoogaa dib-u-celin ah oo ka imanayay tiknoolajiyadaha qaarkood oo fahmay dulucda iyo dib-u-eegista fiidiyowga. Waxay lahaayeen dhibco wanaagsan, laakiin fiidiyowgu wuxuu u baahan yahay dhagaystayaal, inbadan oo ka mid ah barnaamijyada la martigeliyaana waa ay bixiyaan. Marka isku darka kharashka baaxadda, kakanaanta cabbirka shaashadda, iyo isku xirnaanta, marka lagu daro helitaanka dhagaystayaasha ayaa ahaa sababahayga koowaad.
Taas macnaheedu maaha ma aaminsani in shirkadaha aysan fiirfiirin dheer ku samaynaynin xalkooda. Marka laga hadlayo fiidiyowga, tusaale ahaan, shirkado badan oo waaweyn ayaa isku dhajiyay istiraatiijiyadooda fiidiyowga ah maaraynta hantida dijitaalka ah nidaamyada. Waxay samaysaa dareen macquul ah!
Toban sano ka hor markii awoodda xisaabinta ay ahayd mid aad qaali u ah, xawaaraha ballaadhku wuu qaali ahaa, horumarkana waa in laga sameeyaa meel hoose, waxba kama dhimayaan ismiidaaminta shirkaddu inay isku daydo inay dhisto xalka suuqgeynta. Sooftiweerka oo ah adeeg bixiye wuxuu balaayiin ku bixiyay warshadaha si loo horumariyo barnaamijyo laga faa'iideysan karo inteena badan - haddaba maxaad u sameyn laheyd maalgashigaas? Ma jirin wax ku soo noqosho ah oo waxaad nasiib u yeelan lahayd haddii aad waligaa dhulka ka hesho.
Si dhakhso leh horay ugu socda maanta, in kastoo, iyo awood xisaabinta iyo xawaare ballaadhan ayaa badan. Horumarna looma baahna in laga bilaabo meel hoose. Waxaa jira aagag horumarineed oo deg deg ah oo awood badan, dhuftoyada keydka xogta weyn, iyo matoorada ka warbixinaya ee ka dhigaya helitaanka wax soo saar jaban oo deg deg ah Ma aha in la xuso tirada badan ee raqiiska ah API (barnaamijka isku xirka barnaamijyada) adeeg bixiyaasha suuqa ku jira. Soosaara keli ah ayaa silig ku xidhi kara barxad leh interface interface qasacadaysan kuna xidhi kara an API daqiiqado gudahood.
Sababahan awgood, waanu ka noqonay mowqifkeenii xaalado badan. Tusaalooyin dhowr ah oo aan jeclaan lahaa inaan la wadaago:
Wareeg Press - Markii aan daabacayay joornaalkeyga tobanaan kun oo macaamiil ah, waxaan ku qarashgareyn jiray emayl bixiyaha lacag ka badan tii aan dhab ahaan ka heli jiray dakhliga xayeysiiska ee goobta. Natiijo ahaan, waxaan la shaqeeyay saaxiibkay si aan u horumariyo suuq geynta iimaylka oo si toos ah ugu dhex jira WordPress. Lacag yar bil kasta, waxaan u diraa boqollaal kun oo emayl. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan u soo bandhigi doonnaa qof walba!
Macluumaadka SEO-ga - Highbridge lahaa daabacaad aad u ballaadhan oo lahaa kor u dhaafaya nus milyan oraahyo muhiim ah oo loo baahan yahay in loola socdo juqraafi ahaan, astaan, iyo mowduuc. Dhamaan bixiyeyaasha halkaas jooga ee wax ka qaban lahaa tan waxay ku jireen shanta lambar ee sare ee shatiga - midkoodna ma hanan karo mugga xogta ay hayaan. Sidoo kale, waxay leeyihiin qaab dhismeed u gaar ah goobta iyo qaab ganacsi oo aan ku habboonayn madal qasacadaysan. Marka, qiimaha liisanka ee barnaamijka kale, waxaan awoodnay inaan soo saarno barxad gaar u ah qaabkooda ganacsi. Maalgashi kasta oo ay sameeyaan maahan maalgashi shati ay ka fogaan doonaan - waxay sare u qaadeysaa barnaamijkooda oo waxay ka dhigeysaa mid wax ku ool ah gudaha. Waxay ku keydinayaan falanqeyn qiimo leh iyo waqti ay ku shaqeynayaan annaga oo u dhiseyna barxadda iyaga.
Suugada Wakiilada - waxaa soo saaray tobankii sano ee la soo dhaafay saaxiibkey, Adam, barnaamijka 'Sauce Agent Sauce' waa urururin dhammaystiran oo qaybo ah - laga soo qaatay webka, daabacaadda, emaylka, moobiilka, raadinta, arrimaha bulshada, iyo xitaa fiidiyaha. Adam wuxuu adeegsan jiray adeegyada emailka wuxuuna ku qaatay waqti adag inuu ka shaqeeyo caqabadaha nidaamkooda, sidaas darteed isagu wuxuu dhisay tiisa halkii! Wuxuu sidoo kale awood u siiyaa barnaamijkiisa API-yo badan, isagoo siinaya xal aad u jaban oo noqon kara boqolaal ama kumanaan doolar warshadaha kale. Wakaaladda Maraqa ayaa hadda u dirta malaayiin emayl iyo tobanaan kun oo fariimo qoraal ah oo loogu talagalay penniyada doollarka. Adam wuxuu awood u yeeshay inuu si toos ah ugu wareejiyo macaamiishiisa.
Kuwani waa tusaalooyin yar halka, halkii aad ruqsad siin lahayd jaangooyo caadi ah oo leh xadad aad u daran, xalalkan waxaa lagu dhisay daruuraha, mararka qaarkoodna waxaa loo isticmaali jiray APIs aad u adag. Isdhexgalka adeegsadayaasha waxaa loo qaabeeyey gaar ahaan dalabka iyo isticmaalaha, hababka ayaa loo soo saaray si loo hubiyo in adeegsadayaashu ay wax walba qaban karaan iyagoon haysan waqti badan oo ah duugista xogta ama ka shaqeynta arrimaha madal.
Ha dhayalsan dadaalka lagu dhisayo
Waxaa jira waxyaabo ka reeban. Sababta qaar awgeed, shirkado badan ayaa doorta inay dhisaan mid iyaga u gaar ah Nidaamka Maareynta Maareynta waxayna isu rogtaa qarow. Taasi waa sababta oo ah waxay dhayalsanayaan xaddiga shaqada ay qaadato iyo tirada astaamaha nidaamyadaasi runti leeyihiin ee ka dhigaya mid fududeynaya degel goob raadinta iyo warbaahinta bulshada mid fudud. Waxaad ubaahantahay inaad aad uga taxaddarto qiimeynta barmaamij laga yaabo inaadan khibrad u laheyn. Tusaale ahaan, markii aan dhisnay adeegga e-maylkeenna, waxaan horeyba u ahayn khubaro ku saabsan gaarsiinta iyo gaarsiinta emaylka… marka waxaan tixgelinnay dhammaan astaamahaas dheeriga ah.
Waxtarkaas ayaa ah halka keydka loogu talagalay shirkadaha. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tan fiiriso markaad falanqeyneyso miisaaniyaddaada. Aaway kharashkii ugu badnaa ee shati-siintaadu? Immisa lacag ah ayey kugu kacaysaa inaad ka shaqeyso xaddidnaanta meheradahaas? Noocee noocee ah kaydinta kharashka iyo waxtarka shirkaddaadu ogaanaysaa haddii barxadda loo dhisay si ay ugu habboonaato baahiyahaaga halkii ay ka ahaan lahayd qaybta suuqa oo dhan? Haddii aad ku bixisay kharashka ruqsad siinta horumarinta sannad kasta, sidee dhakhso leh ayaad u heli lahayd madal caado ka ahayd kana wanaagsan xallinta suuqa?
Tani waa waqtigii lagu bilaabi lahaa go'aan ka gaarista haddii aad sii wadi doontid inaad iibsato xalka qof kale, ama aad dhisto farshaxan heer sare ah oo aad ogtahay inaad gaaska ku socon karto!
Tags: maraqa wakiilkaAPIdhiso boosteejo emaildhis ama iibsodhisto madal seokharashka horumarkaqiimaha lahaanshahakharashka horumarkadhexgalkakharashka lahaanshaha
Sababaha ay tahay in Maamulahaagu ku dhexjiro Baraha Bulshada